भोल्टायरका प्रसिद्ध भनाइहरु - Safal Stories
Home Safal's Columns Quotations भोल्टायरका प्रसिद्ध भनाइहरु
भोल्टायर विद्रोही र परिवर्तनकारी लेखक हुन् । लेखन जगतमा उनको स्थान बेग्लै रहेको छ । भोल्टायरको आफ्नै लेखन शैली थियो। उनका थुप्रै कृतिहरु सम्मानित छन् भने उनले लेखेका नाटकहरु मन्चन भएका छन्।
भोल्टायरका प्रसिद्ध भनाइहरु:
पैसाले सबैकुरा गर्छ भन्ने नसोंच । होइन भने, तिमीले पैसाको लागि जे पनि गर्न थाल्नेछौ ।
‘कमन सेन्स’ अर्थात साधारण बुझाई साधारण कुरा होइन ।
व्यक्तिले दिएको जवाफको आधारमा होइन, उसले गरेका प्रश्नको आधारमा उसको मूल्यांकन गर।
भगवानले हामीलाई जीवन उपहार दिए। आफू राम्रोसंग बाच्ने उपहार भने हामीले आफैले दिनुपर्छ।
उत्कृष्टता समयको धिमा गतीमा आउँछ ।
पढौं र नाचौं । यी दुई कामले संसारमा कसैलाई हानी गर्दैन।
मायालाई आँखा चिम्लेर ख्याल राख्ने होइन, आफूलाई आफैले गर्ने मायाको ख्याल राख्नुपर्छ।
आफ्नो बारेमा सोंच र अरुलाई पनि उनीहरुको बारेमा सोंच्न स्वतन्त्र छोडिदेऊ।
सफलता प्राप्त गर्नको लागि मूर्ख भएर मात्र हुँदैन, राम्रो व्यवहार भएको पनि हुनुपर्छ ।
उत्कृष्टता र राम्रो शत्रु हुन्।
इतिहास दर्शन जसरि लेखिनुपर्छ ।
कामलाई हेर्नु र त्यसको सुन्दरता थाहा पाउनु ठूलो कुरा होइन। कामलाई अनुभव गर्न सक्नुपर्छ र त्यसले हामीमा प्रभाव पार्नुपर्छ।
एक्लै भएको समयमा मान्छेले गर्व गर्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ।
प्रकृतीसंग शिक्षामा भन्दा धेरै तागत छ।
कलम समात्नु भनेको युद्धमा होमिनु जस्तै हो।
हरेक व्यक्ति आफूले राम्रो नगरेको कुनै न कुनै कामको पछुतो मानिरहेकै हुन्छ।
अन्धविश्वासलाई मूर्खहरुले मात्र कारणको रुपमा लिइरहेका हुन्छन् ।
‘आज सबैकुरा ठिक छ’ , यो हाम्रो भ्रम हो।
आँशु दु:खका मौन भाषा हुन् ।
Previousगल्ती भयो ? अब के गर्ने ? सहयोगी टिप्स
Nextयी ३ कुरा जसले तपाईंलाई जीवनमा असफल बनाउन सक्छन्